Fiteny mandarina - Wikipedia
官話 na 官话 (guānhuà)
Isan'ny mpiteny 1,3 miliara
Faritany teny ofisialy any Sina, Taiwan ary Singapaoro
Sata anisan'ny teny ofisialin'ny Firenena Mikambana
Ny fiteny mandarina (amin'ny teny sinoa 官話), izay tsorina indraindray amin' ny hoe "fiteny sinoa", dia iray amin' ireo karazam-piteny sinoa tenenina ao amin' ny tapany avaratra-atsinanan' i Sina an-kôntinenta. Ny fiteny mandarina no be mpiteny indrindra maneran-tany. Soratana amin' ny alalan' ny soratra sinoa (sinôgrama) sy ny abidy latina (piniiny) ary amin'ny alalan' ny bopomofo koa ny fiteny mandarina.
Noho ny fampiasaina io fiteny io ho fiteny fanabeazana, heverina fa eo amin' ny 1 300 000 000 eo ho eo no mahay miteny io fiteny io ankehitriny. 800 000 000 eo ho eo no Sinoa manana io fiteny io ho teny nibeazana (izany hoe io fiteny io no voalohany nianarany).
Ianaran' ny Sinoa rehetra ny fiteny mandarina nefa misy ny Sinoa zokinjokiny sasany izay tsy miteny mandarina fa miteny amin' ny fiteny sinoa hafa toy ny fiteny kantôney. Misy fianakaviambe sinoa any ivelan' i Sina izay mampiasa ny fiteny mandarina izay ampianarina amin' ny lisea sy oneversite maro manerana izao tontolo izao.
Fanononana ny teny sinoa mandarina[hanova | hanova ny fango]
Ny fanononan' ny fiteny sinoa mandarina dia mifototra amin' ny fanononan' ny firokin' i Beijing, izay manana voambolana ary fanononana miforotra amin' ny firoky sinoa tavaratra.
Miisa efatra ireo haabom-peo misongadiana amin' ny fiteny sinoa, izay teny ara-kaabom-peo :
Ny haabom-peo voalohany : 妈 (ma1);
Ny haabompeo faharoa : 麻 (ma2);
Ny fahatelo : 马 (ma3);
Ary ny fahaefatra : 骂 (ma4)
Misy ihany koa ny atao hoe haabom-peo tsy mitongilana izay mety antsoina hoe haabom-peo fahadimy. Io haabom-peo fahadimy io dia hita amin' ny fanononan' ny sinôgrama 吗 (ma na ma5) izay midika "ve".
Miaraka amin' ny haabom-peo dia 1 277 ny isan' ny vaninteny ananan' ny teny sinoa mandarina. Izay hahafahana manavaka am-bava ny teny ampiasaina indrindra amin' ny fiteny sinoa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_mandarina&oldid=1000975"
Voaova farany tamin'ny 31 Janoary 2021 amin'ny 11:18 ity pejy ity.